झापा र सहारा बीचको दोस्रो भेटमा कसले मार्ला बाजी ? – Khel Dainik
झापा र सहारा बीचको दोस्रो भेटमा कसले मार्ला बाजी ?
बिर्तामोड (खेलदैनिक) । मग मग चौथो झापा गोल्डकपको उद्घाटन खेलमा शनिबार झापा ११ एफसी र पोखराको सहारा क्लबले जीत दर्ता गर्ने बिश्वासका साथ मैदान प्रवेश गर्ने बताएका छन् ।
प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै टिम क्याप्टेन र कोचले सो दावी गरेका हुन् । घरेलु टोली झापा ११ का कोच प्रवेश कटुवालले पूर्ण अपेक्षाका साथ तयारी गरेको बताए ।
झापाले यस सिजन फिदिम गोल्डकपमा जीत दर्ता गरेको छ भने अन्य दुई प्रतियोगितामा हार व्यहोरेको छ । कर्ण लिम्बूको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिने झापाली टिममा विशाल राई ए र दिलेन लोक्तामलगायत पुराना खेलाडी छन् भने अन्य नयाँ खेलाडी रहेको कोच कटुवालले बताए ।
उता सहाराका कप्तान मानबहादुर तामाङले झापासँगको भिडन्तलाई सहज रुपमा नलिएको बताएका छन् । कप्तान तामाङले भने ‘मोफसलको उत्कृष्ट टिम झापाप्रति मेरो विशेष सम्मान छ । बुढासुब्बा गोल्डकप र पोखरामा आयोजित आहारारा गोल्डकपमा हार व्यहोरेर झापा खेल्न आएको सहारामा फ्रेस खेलाडी भएकाले जीत निकाल्ने उनको दाबी छ ।
यसअघि एकपटक भेट भएको यी दुई टोलीबीच यो दोस्रो भेट हो । कटारी गोल्डकपमा पहिलोपटक आमने सामने हुँदा झापाले त्यो खेल १–० को आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
पोखरेली कोच प्रल्हाद हिराचनले झापालीसँगको भिडन्त विशेष महत्वका साथ हेरिएको बताए । ‘उसैको घरेलु मैदानमा उसैसँग भिड्न पाउँदा खुसी पनि लागेको छ’, उनले भने ।
‘ओपनिङमात्र होइन, टुर्नामेन्ट नै हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ’, झापाली कप्तान कर्ण लिम्बूले भने । ९० मिनेटभित्रै जित्ने दाबी गरेका उनले झापाको ‘सेट टिम’ पहिलो हतियार भएको दाबी गरे । भर्खरै लिग खेलेका खेलाडीहरु भएकाले पनि उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने उनको भनाइ थियो ।
झापा गोल्डकपको चौथो संस्करणमा हङकङसहित १० टिम सहभागी छन् । विजेताले नगद १२ लाख ५५ हजार र उपविजेताले ६ लाख पाँच हजार हात पार्नेछ ।
← हिमालयन कप : संयुक्त सेमिफाइनलमा लोयल्टी कप शुरु, सिद्धार्थ बनस्थलीको जित →
शानदार जितका साथ एपिएफ स्कुल सेमिफाइनलमा फाल्गुन १७, २०७५
चौथो स्थानीय तह मकवानपुर गोल्डकप तेस्रो सातादेखि फाल्गुन १७, २०७५
केसीलाई राष्ट्रिय यु–२० फुटबल टोलीको जिम्मेवारी फाल्गुन १७, २०७५
उपाधिमाथि रोयलको ह्याट्रिक फाल्गुन १७, २०७५
वाल्मिकी र नेपाल राष्ट्रिय मावि सेमिफाइनलमा फाल्गुन १७, २०७५
नेपालले ओमान र टिमोर लेस्टेसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने फाल्गुन १७, २०७५